TURTLE SOUP (လိပ် စွပ်ပြုပ်) ထရိတ်ဒင်း နည်းဗျူဟာ - L. RASCHKE မှ ချက်ပြုပ်ပါတယ်
ယနေ့ Turtle Soup (လိပ် စွပ်ပြုပ်) လို့ခေါ်တဲ့ ထရိတ်ဒင်းနည်းဗျူဟာကို ကျွန်တော်တို့ပြောမှာပါ. ကိုယ့်ကိုကိုယ် Turtle (လိပ်) လို့ခေါ်ကြတဲ့ ထရိတ်ဒါတွေဟာ အမြတ်ရှာဖွေဖို့ ထပ်တူညီတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်. အောင်မြင်တဲ့ ထရိတ်ဒါဖြစ်တဲ့ Linda Bradford Raschke ဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ထရိတ်ဒင်း နည်းပညာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်ပါတယ်. ထိုနည်းဗျူဟာတွေကို Turtle (လိပ်) ထရိတ်ဒါတွေက အသုံးချခဲ့ပြီး နည်းဗျူဟာအသစ် Turtle soup (လိပ် စွပ်ပြုပ်) လို့ အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်.
ဒီနည်းဗျူဟာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဈေးကွက်အတွင်း false breakouts တွေကို ရှာနိုင်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဆို false breakoutsဆိုတာ ဘာလဲ? ဆိုပါတော့ ဈေးတန်းက သေချာတိကျတဲ့ support သို့မဟုတ် resistanceတစ်ခုခုကို ဖောက်ထွက်ပြီးနောက်မှာ အရင်နေရာကို အမြန်ပြန်ဆင်းသွားတာမျိုး၊ တက်သွားတာမျိုးကို false breakoutလို့ ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်. ထရိတ်ဒါအများစုက ထိုဈေးကွက်မျိုးရဲ့ ကြောင်တောင်တောင်နိုင်မှုကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး. ပြီးတော့ false breakout တွေကို ခြွင်းချက်ထားရမဲ့ အရာတွေလို့ ယူဆထားပါတယ်. Turtle Soup (လိပ် စွပ်ပြုပ်) ထရိတ်ဒင်း နည်းဗျူဟာက ထို false breakout တွေကို မရှောင်နိုင်ပါဘူး. ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ဖော်ထုတ်ပြသပေးပါတယ်.
အချိန်ကာလ - M15 ထက် မနည်းရပါ
စည်းမျဉ်းများ - အတက် မြင်ကွင်း
၁။ ဇယားကိုဖွင့်ပါ. အနည်းဆုံး candle အခု ၂၀ လိုပါတယ်. ဒါဆန်းစစ်မဲ့ အချိန် ပမာဏပါ.
၂။ High နဲ့ low ကိုရှာပါ. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရအောင် မျဉ်းသားထားပါ.
၃။ သင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အနည်းဆုံးနဲ့ အများဆုံး level က လောလောဆယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ candle ကနေ လေးရက်မြောက်အကွာအဝေးမှာ ရှိသင့်ပါတယ်.
၄။ low အောက်ကို ဈေးကကျသွားပြီးနောက် Buy Stop က လွန်ခဲ့တဲ့ candle အခု ၂၀ ရဲ့ Low အထက်ကို5to 10 pip သတ်မှတ်ပေးပါတယ်.
၅။ order လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် Stop Loss ကို လက်ရှိ candle ရဲ့ အနည်းဆုံး 1 pip အောက်မှာထားပေးပါ.
position က အမြတ်ရမယ်ဆိုရင် Stop Loss ကိုသုံးပါ. Stop Loss ကို ဈေးနောက်မှာကပ်ရွှေ့သွားပါ. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဈေးရောက်တဲ့အထိပါ.
အကျိုးအမြတ်များများရနိုင်မဲ့ အပြောင်းအလဲအတက်အကျတွေ တော်တော်များတဲ့ နည်းလမ်းဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရပါမယ်. လွယ်တယ်ထင်ရပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ တော့မဟုတ်လှပါဘူး. ထရိတ်ဒါ အသစ်တွေအတွက် false breakout ရှာရတာ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်.